Dadweyne & Gaadiidley careysan oo saaka xiray wadada Afgooye – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dadweyne & Gaadiidley careysan oo saaka xiray wadada Afgooye
A warsame 9 April 2014 4 April 2019
Muqdisho – Mareeg.com: Dadweyne iyo gaaadiidley careysan ayaa saaka dhiagay debadbax ay ku xireen waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, iyagoo ka cabanaya isbaarooyin ciidamadu dhigteen jidkaas iyo amaan darro ka dhalatay.
Gaadiidleyda iyo dadka deegaanka ayaa xiray inta u dhaxeysa Carbiska ilaa Lafoole, waxeyna arrintaas ku micneeyey iney waxa ka jira wadadaas kusoo jeediyaan indhaha dowladda Soomaaliya.
Mid ka mid ah dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay askarta isbaarada dhiganaya aysan dhibaato ku heyn gaadiidka oo kaliya, hase ahaatee ay dhibaato ku hayaan dadka xaafadaha laamiga ku teedsan.
“Waxaan dhibaato ku qabnaa askarta isbaarooyinka dhiganaya, raga wada gaadiidka garaaca, rasaasna ku rida, ardaydii ayaa iskuulada aadi waayey maxaa yeelay gaadiidka ay saaran yihiin lama dhaafayo” ayuu yiri nin ka mid ah dadka degan Carbiska.
“Rasaasta ay ku ridayaan gaadiidka ayaa guryaha inoogu timid, oo dad naga dhaawacday, sidoo kalana guryaha naga dadloolisay” ayuu sidoo kale yiri ninkaan oo dowladda ka codsaday iney wax ka qabtaan isbaarooyinka la dhigtay wadada u dhaxeysa Afgooyey iyo Muqdisho.
Jidka u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye ayaa waxaa kusoo laalaabta isbaarooyin ay dhiganayaan ciidamada dowladda iyo rag kale oo kusoo labistay dharka ciidamada, mana aha markii ugu horreysay ee wadadaad gaadiidleyda iyo dad kale debadbaxa ka dhigaan.
Diyaarad saaka Nairobi ka qaadeysa Soomaali laga tarxiilayo Kenya
Macallin dugsi Qur’aan oo lagu dilay Muqdisho iyo taliye & xaaskiisa oo la dhaawacay